भ्रष्टाचारी कंसाकारलाई दलेको कालोमोसो एकअर्कामा पोतापोत गर्दै मन्त्रीहरु – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
पूर्वाग्रहले मेरो नाम जोडियो –मन्त्री रविन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । भ्रष्टाचारी सुगतरत्न कंसाकारलाई दलिएको कालोकोसो अहिले ओली सरकारका लागि नैतिकताको विषय बनेर उभिएको छ । आम जनतामा निकै गन्हाएका भ्रष्टाचारी कंसाकारलाई दलिएको कालोमोसो सरकारको अनुहारमा दलिएको कालोमोसो साबित भएको छ । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसम्म यसले कालो पोतेको छ । भ्रष्टाचारी अनुहारमाथि पोतिएको यो कालो पानीले धोएर वा फेसवास गरेर जानसक्ने अवस्थामा छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको अनुहारका कालो मोसो दलियो । उनकै कार्यकक्षमा पुगेर क्रान्तिकारी युवा लिगले उनको अनुहारमा कालो मोसो दल्यो । यसका बारेमा अधिकांशको सकारात्मक तर केहीको नकारात्मक धारणाहरु सञ्चार माध्यमहरुमा आए पनि । साधारण जनताका माझमा यसले चर्चा पनि पायो ।
यद्यपि यो भन्दा अघि पनि युवाहरुले भ्रष्टाचारीहरुमाथि यस्ताखालका कारबाहीहरु निरन्तर गर्दै आएका पनि छन् । तर हालको विशिष्ट परिस्थितिमा कंसाकारमाथिको कालो मोसो उनीमाथिको मात्र नभएर दुईतिहाईप्राप्त त्यो पनि कम्युनिष्टको सरकारमाथि दलिएको कालो मोसोका रुपमा प्रवुद्ध विश्लेषक र सर्वसाधरण्ण जनताका माझमा चर्चामा आएको छ ।
पहिलो कुरा त भ्रष्टाचार किन संस्थागतभएर मौलाइरहेको छ र मन्त्री तथा उच्च ओहदाका कर्मचारीहरु यसमा निर्लिप्त भएर लागिपरेका छन् ? भ्रष्टाचार आफैमा दण्डनीय पनि छ । कानुनमा दण्डको व्यवस्था गरिएको पनि छ । तर भ्रष्टाचारको सप्रमाण गम्भीर आरोपसहित प्रक्रिया अघि बढाइँदा पनि भ्रष्टाचारीहरु उच्च ओहदामा छाती फुकाएर कार्यालयमा बसी कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । अझ उल्टै एक अपराध छोप्न हजारौं अपराधहरु गरिरहेका छन्, ढाँटिरहेका छन् र चुनौती दिइरहेका छन् । कसको संरक्षण छ यिनीहरुलाई ? यो प्रशन जनताले सोधिरहेका छन् । बलात्कारीहरु निर्बाध कुम हल्लाउँदै हिंडिरहेका छन् ।
कमिसन, घुसखोरी, माफियाकरण, बिचौलिया र दलालहरुको बिगबिगी छ । सरकार, त्यो पनि दुईतिहाइको, अझ कम्युनिष्ट नामधारी, समाजवादको निर्माणमा लागेको, निकै त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर आएको भनिएको, पाँच वर्षका लागि बनेको छ । यसैको शासनको सुरुआतमा नै अबाञ्छित तथा देशको कानुनद्वारा निषेधित गरिएका भनिएका काम कार्वाहीहरु खुललमखुल्ला भइरहेका छन् । त्यो पनि सत्तासिन सरकार र यसका उच्चतहका कर्मचारीहरुबाट ।
यी कुराहरुबाट थाह हुन्छ स्वयम् सरकार आफैमा यी कुराहरुमा प्रत्यक्ष जोडिएको छ । मानौ सरकार भनेको देश र जनविरोधीहरुको माखेसांलोको एक केन्द्रीकृत स्वरुप मात्र हो । कंसाकारको भ्रष्टाचारसँग सत्ताधारी पार्टीका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी मुछिएका मात्र होइन, एक निर्देशक र प्रमुख जिम्मेवारका हैसियतले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी सत्ताधारी दल नेकपाका युवा नेतामा गनिन्छन् । उनी वाइड बडी विमान खरिद अनियमितताका मुख्य दोषी हुन् । उनलाई जोगाउनका लागि आज छानबिन समितको प्रतिवेदन नै खोटपूर्ण भनेर उचाल्न थालिएको छ । यो शायद गृहमन्त्रालयका सचिव रहेका प्रेम राईको विषयलाई लिएर त्यो गर्न खोजिदै छ ।
अझैसम्म समाधान नभएको र दोषी पत्ता नलागेको कञ्चनपुर निर्मला बलात्कार तथा हत्या घटनाको अपजस बोकिरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको थाप्लोमा खेलिएको अर्को खेल हुनसक्छ । क्रान्तिकारी युवा लिगले त कंसाकारको मुखमा मात्र दल्यो, कालो मोसो । त्यो कालो मोसो अब नेकपा र यसको ओली सरकारले एकअर्काको अनुहारमा दलादल गर्ने प्रयत्नमा लागिपरेका छन् ।
क्रान्तिकारी युवा लिगले गरेको महाप्रन्धकमाथिको जनकारबाही ओली सरकारका लागि कानुनी र नैतिकताको चुनौती बनेर आएको छ । जनस्तरबाट भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीको माग अनुमोदन हुने तर ओली सरकार त्यसलाई लुकाएर वा संरक्षण गरेर बस्ने गर्नु कानुन र नैतिकता दुवै हैसियत गुमाएको सरकारमा परिणत हुनु हो । जनताले हेर्न चाहेका छन् नेपाल र नेपालीको ४ अर्बभन्दा बढी अनियमितता गरेका मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, सरकारका बहालवाला सचिवहरु, पूर्वमन्त्रीहरु तथा योजनाकार सुगतरत्न कंसाकारमाथि ओली सरकारले कारवाही गर्ने आँट गर्छ वा उनीहरुको बचाउ ? यदि बचाउमा लागेछ भने सुगतरत्नको अनुहारमा लागेको कालो उनीहरुको अनुहारमा स्वतः सर्ने छ ।